ဘဝအတွက် ပုရွက်ဆိတ်တွေဆီက သင်ယူနိုင်တဲ့ အချက် (၄) ချက် - Thutazone
ဘဝအတွက် ပုရွက်ဆိတ်တွေဆီက သင်ယူနိုင်တဲ့ အချက် (၄) ချက်
ရေးသားသူ – ရွှေညာမောင် (Focus Youth E-magazine)
ပုရွက်ဆိတ်တွေကို သတိထားပြီး စောင့်ကြည့်ဖူးရဲ့လား? ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်ဟာ သူ့သွားရာလမ်းမှာ အစိုင်အခဲ၊ အတားအဆီးတစ်ခုခုရှိလို့ နောက်ပြန်လှည့်သွားတယ်ဆိုတာ မြင်ဖူးရဲ့လား? (ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်မလှည့်ပါဘူး)
နောက်ပြီးတော့ ပုရွတ်ဆိတ်တွေဟာ ဆောင်းတွင်းကာလမှာ စားသောက်ဖို့အတွက် နွေကာလအတွင်းမှာ ရိက္ခာဘယ်လောက်ထိစုဆောင်းတတ်ကြသလဲ? (အတိုင်းအဆမရှိကို စုဆောင်းတတ်ကြပါတယ်။)
ဟုတ်ကဲ့။ ပုရွက်ဆိတ်တွေမှာ အောင်မြင်ရေး တက်ကျမ်းတွေမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတွေအတုယူနိုင်တဲ့ အလေ့အထကောင်းတွေတော့ရှိပါတယ်။
ခုနက ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ ပုရွက်ဆိတ်တွေဟာ သူတို့သွားရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာ အတားအဆီးတစ်ခုတွေ့ရုံနဲ့ ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်မလှည့်တတ်ပါဘူး။ ကွေ့ဝိုက်ပြီး ရှောင်လွှဲကာ လိုရာလမ်းကိုရောက်အောင် သွားတတ်ကြပါတယ်။
သင်ခန်းစာ – ဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မလှည့်ပါနဲ့။ ကိုယ်သွားလိုတဲ့နေရာကို သွားချင်စိတ်ရှိရင် နည်းလမ်းရှာပြီးသွားပါ။
(၂) နွေကာလမှာ ဆောင်းအကြောင်းတွေးတယ်။
ပုရွက်ဆိတ်တွေဟာ နွေရာသီမှာ အပြင်ထွက်ပြီး အစာရှာစုဆောင်းတတ်ကြပါတယ်။ (ဒါ့ကြောင့် နွေရာသီမှာ ပုရွက်ဆိတ်တွေကိုအတွေ့များပါတယ်။) ဆောင်းကာလနဲ့ မိုးကာလမှာတော့ အသိုက်အောင်းပြီး နွေတစ်လျှောက် စုဆောင်းခဲ့တာတွေနဲ့ အသက်ဆက်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အခွင့်အရေးရတဲ့ နွေကာလမှာ အစားအစာတွေကို ရှာရုံသာမရှာဘဲ အနာဂတ်အတွက် ရည်စူးပြီး အပင်ပန်းခံကာ ရှာဖွေစုဆောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလည်း လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
သင်ခန်းစာ – ကိုယ် ကောင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာလည်း မေ့လျော့ပျော်မွေ့မနေဘဲ အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ကို ကြိုတွေးကာ ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
(၃) ဆောင်းကာလမှာ နွေအကြောင်းတွေးတယ်။
မိုးရာသီတို့၊ ဆောင်းရာသီတို့လို အစာရှာမရတဲ့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်မှာလည်း စိတ်ဓါတ်ကျမနေပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေရလာမယ့် နွေရာသီကို ကြံကြံခံပြီး အားတင်းထားတတ်ကြပါတယ်။
သင်ခန်းစာ – အဆိုးပြီးရင် အကောင်းတွေလာပါလိမ့်မယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေက သင့်ရဲ့အဆိုးရွားဆုံးနေ့ရက်တွေကို ဖြတ်ကျော်ဖို့ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
ပုရွက်ဆိတ်တွေဟာ ရိက္ခာစုဆောင်းတဲ့အခါမှာ ဘယ်လောက်စုဆောင်းမယ်ဆိုပြီး အကန့်အသတ်မထားပါဘူး။ သူတို့သလောက်ကိုစုဆောင်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒါမှလည်းပဲ ခက်ခဲတဲ့ရာသီကို ကျော်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာ လုံလောက်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။
သင်ခန်းစာ – နည်းနည်းပဲအောင်မြင်မယ်။ များများအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေထက်စာရင် ကိုယ်စွမ်းအားရှိသလောက် ကြိုးစားတာဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကန့်သတ်မထားသင့်တဲ့အရာတွေထဲမှာ ကြိုးစားခြင်း ပါဝင်ပါတယ်။
ရွှေညာမောင် (Focus Youth E-magazine)